ပြည်သူတို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့သောအလုံနှင့် ကျွန်းချောင်း ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်း | NPE
ပြည်သူတို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့သောအလုံနှင့် ကျွန်းချောင်း ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်း
“အလုံ”မှာတစ်မူ စက်သစ်တွေ ထည့်တဲ့အပြင်
ရွှေသည်တန်ဖိုးအလွန်ကြီး၏။ ရွှေကိုလူတိုင်းလိုလို နှစ်သက်မက်မောကြ၏။ လိုလားတပ်မက်ကြ၏။ ရယူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကြိုးစားလေ့ရှိကြ၏။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုအားလုံးအတွက်ကား ရွှေကဲ့သို့ပင် တန်ဖိုး ထားလိုလားကြသောအရာရှိသည်ဆိုပါလျှင် ၎င်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြစ်မည်မှာ မလွဲနိုင်ပေ။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများ၊ လူမှုစီးပွားဘဝများ တိုးတက်မြင့်မား လာစေရန်ကဏ္ဍစုံမှ ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိသည်။ ယင်းသို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိသည့် ကဏ္ဍပေါင်း များစွာအနက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားကဏ္ဍများသည် အထူးအရေးပါသည့်အတွက် အဆိုပါကဏ္ဍများ အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး ကို ပြတ်သားသည့်မူဝါဒများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံအတွင်း နှစ်စဉ်တိုးတက်လာသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် အမြဲမပြတ် တွက်ချက် သုံးသပ်၍ ရေတို ရေရှည် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း များကို ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်နယ်၊ ပြည်မ မခွဲခြားဘဲ တိုင်းရင်း သား ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးအတွက် ကြိုးပမ်း လျက်ရှိခြင်းပင်။
ဤသို့ မွန်မြတ်သောစိတ်ထားဖြင့် မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်း ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတိုင်မီက တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှုမှာ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သာရှိခဲ့ ရာမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၅၀ ဒသမ ၀၉ ရာခိုင်နှုန်း အထိ တိုးတက်လာသည့် သာဓကမှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ် ၏။ ဆက်လက်၍ ကြိုးပမ်းရဦးမည့် အန္တိမရည်မှန်းချက် ကား ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ရာနှုန်းပြည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်ရေးတည်း။
လူမှုစီးပွားဘဝအခြေခံကောင်းများ ခိုင်မာလာသည် နှင့်အမျှ နိုင်ငံတော်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်သည် လည်း နှစ်စဉ်တရိပ်ရိပ် တိုးတက်လာလျက်ရှိသည်။ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည်လည်း တိုးတက်လာ သည့် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံး စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိ၏။ ယခုနှစ်နွေရာသီ တွင် တိုးတက်သုံးစွဲလာမည့် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို အမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကိုခံယူ၍ Liquefied Natural Gas to Power စီမံကိန်းများအပါအဝင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မည့် စက်ရုံများစွာကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် အလုံ၊ သန်လျင်နှင့် သာကေတတို့၌ လည်းကောင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မကွေးနှင့် ကျွန်းချောင်း တို့၌လည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ရွှေတောင်၌လည်းကောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျောက်ဖြူ၌လည်းကောင်း…အရေအတွက်အားဖြင့် ခုနစ်ခုသော စက်ရုံစီမံကိန်းများနှင့် ပမာဏအားဖြင့် ၁၁၆၆ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မယုံနိုင် လောက်သော အချိန်တိုကာလအတွင်း တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပေသည်။
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရခြင်း သည် အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်ပါ၏။ စိတ်ကူး ယဉ်မှု သက်သက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်၍ မရနိုင်။ နိုင်ငံ၏ပကတိ စီးပွားရေးဘဝ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နိုင်ငံ ၏သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် များကို အခြေပြု၍ ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်းနှီးရုန်းကန်ရ၏။ ဝေဖန် မှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရ၏။ ဤသို့သော ကြိုးပမ်းခဲ့မှုများ၏ အသီးအပွင့်အဖြစ် မကွေး တိုင်းဒေသကြီး မကွေးမြို့တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ၆၆ မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်မှစတင်၍ နိုင်ငံတော်ဓာတ်အား စနစ် အတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာ ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ဝန်ကို သယ်ပိုးထမ်းရွက်လျက်ရှိခဲ့ပေပြီ။
ယခုအခါ ကျန်ရှိသော ဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းခြောက်ခု အနက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလုံမြို့နယ် အလုံဓာတ်အားပေးစက်ရုံဝင်းအတွင်းတွင် တည်ဆောက်အကောင် အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် အလုံ ၁၅၁ ဒသမ ၅၄ မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းနှင့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူခရိုင်၊ ကျွန်းချောင်းဓာတ်အားပေးစက်ရုံဝင်းအတွင်း တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် ကျွန်းချောင်း ၂၀ ဒသမ ၅၄ မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည်လည်း လျှပ်စစ်ဓာတ် အားများ စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အလုံတွင် လက်ရှိဌာနပိုင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံရှိပါ၏။ ထိုစက်သည် လည်ပတ်ဝန်ထမ်း ခဲ့ရသည့်ကာလ ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ စက်စွမ်းရည်မှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ တစ်ရက်လျှင် ရတနာ ဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ ၃၆ သန်းကို အသုံးပြုသည့်တိုင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၇၀ ခန့်သာ ထွက်တော့သည်။ ယင်းသို့ စက်စွမ်းရည်ကျဆင်းနေသော ဌာနပိုင်စက်များအစား စွမ်းရည်မြင့်မားသော စက်များဖြင့် အစားထိုးရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ စက်ရုံအသစ်တည်ဆောက် ရန် မြေနေရာအသစ်မလို။ စက်ရုံအသစ်လည်ရန် ဓာတ်ငွေ့များ ထပ်မံမလို။ ၅ ဒသမ ၉ ဧကကျယ်ဝန်းသော လက်ရှိ အလုံ စက်ရုံဝင်းအတွင်းတွင်ပင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဓာတ်ငွေ့ ပမာဏအတိုင်း သုံးစွဲစေခြင်းဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းပင်။ အကျိုးကျေးဇူးကား လက်ရှိသုံးစွဲ နေသော ဓာတ်ငွေ့ပမာဏအတိုင်း ယခုစက်သစ်ကြီးများမောင်းနှင်ခြင်းဖြင့် ၁၅၁ ဒသမ ၅၄ မဂ္ဂါဝပ် ထွက်ရှိလာမည်။ မူလကထက် မဂ္ဂါဝပ် ၈၀ ကျော် ပိုမိုထုတ်လုပ်လာနိုင်ခြင်း တည်း။ နိုင်ငံအတွက် မဂ္ဂါဝပ် ၈၀ ဆိုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပမာဏသည် ရွှေကဲ့သို့ပင် တန်ဖိုးကြီးလှ၏။
အလုံစက်ရုံသစ်စီမံကိန်းကို International Competitive Bidding (ICB) စနစ်ဖြင့် ၂၈.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည်။ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် Consortium of China Energy Engineering Group-Hunan Electric Power Design Institute Co.,Ltd. China its (Holding) Co.,Ltd. and Shenzhen Shennan Power Gas Turbine Engineering Technique Co.,Ltd. အနေဖြင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၂.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး တာဘိုင် နှင့် ရေနွေးငွေ့သုံးတာဘိုင်ဟူ၍ အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိရာ ယခု အခါ ပထမအဆင့်ဖြစ်သော သဘာဝဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်စက်မှ မဂ္ဂါဝပ် ၁၀၀ စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒုတိယ အဆင့် ရေနွေးငွေ့တာဘိုင် ၅၁ ဒသမ ၅၄ မဂ္ဂါဝပ်သည်လည်း မကြာမီ ပြီးစီးပေတော့မည်။
အလုံစက်ရုံတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင် စက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ GE ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော Frame 9E အမျိုးအစား ခေတ်မီတာဘိုင်စက်ဖြစ်သည်။ ကာလတို ငါးနှစ်အနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကာလရှည် အစီအမံအနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအသစ် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ် သည်။ ယင်းသို့ ကာလရှည် အစီအမံဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည့် စီမံကိန်းအတွက် ယခုတည်ဆောက်ခဲ့သော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းများမှာ အဆင်သင့် ကျန်ရှိနေမည်သာဖြစ်ပေသည်။ အလုံစက်ရုံစီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိလာမည့် ဓာတ်အားများကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ အဓိကဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနေသည့် ၂၃၀ ကေဗွီ အလုံပင်မ ဓာတ်အားခွဲရုံမှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပိုလျှံသည့် ဓာတ်အားကို နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်း ဖြန့်ဖြူး သွားမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးများလှပါ၏။
စတင်တည်ဆောက်ချိန်မှ ရက်ပေါင်း ၂၇၀ အတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်ရမည့် အလုံစက်ရုံစီမံကိန်း၏ အသီးအပွင့် များကို စတင်ခံစားနေရပြီဖြစ်သည်။ လွယ်ကူလှသည်တော့ မဟုတ်၊ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဒုက္ခပေးနေသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို ရင်ဆိုင်ရ၏။ အကန့်အသတ်ပေါင်း များစွာကြားမှ စက်ပစ္စည်းများ အချိန်မီရောက်ရှိရေး၊ တည်ဆောက်မည့်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ အချိန်မီရောက်ရှိရေး၊ မဟာသင်္ကြန်ကာလ ဒေသခံလုပ်သား များရရှိရေး စသည့် စိန်ခေါ်မှုများစွာ…။
ဌာနအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကိုအကြောင်းပြု၍ စိတ်မပျက်၊ အားမလျှော့၊ မတွေဝေ၊ ရည်မှန်းချက်အပျောက်မခံခဲ့။ ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ခြင်းများကို နိုင်ငံတော်အဆင့် ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်မှုခံယူ ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီး ဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကာ ပေါက်မြောက်အောင်မြင် အောင် တက်ညီလက်ညီ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေသည်။
အလားတူပင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ကျွန်းချောင်း ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဝင်းအတွင်း တည်ဆောက်အကောင် အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ကျွန်းချောင်း ၂၀ ဒသမ ၅၄ မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းသည်လည်း ယခုအခါ ဓာတ် အားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်းချောင်း စက်ရုံစီမံကိန်း ကိုလည်း အလုံနည်းတူ International Competitive Bidding (ICB) စနစ်ဖြင့် ၂၈.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် Consortium of V Power Group Holdings Ltd. and V Power Holdings Ltd အနေဖြင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံထုတ် MTU အမျိုးအစား ၂ ဒသမ ၀၂၆ မဂ္ဂါ၀ပ် ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်စက် ၁၁ လုံးကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့၏။
စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သော ကုန်းတွင်းဓာတ်ငွေ့ တစ်ရက်လျှင် ကုဗပေ ငါးသန်းကို လက်ရှိ စွမ်းရည်ကျဆင်း နေပြီဖြစ်သည့် ဌာနပိုင် ကျွန်းချောင်းဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ဌာနပိုင်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံမှာ တစ်ရက်လျှင် ကုန်းတွင်း ဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ ငါးသန်း အသုံးပြုသည့်တိုင် ငါးမဂ္ဂါဝပ်မျှသာ ထုတ်လုပ်နိုင်၏။ ယခုတပ်ဆင် သည့် စက်များသည်ကား အလုံစက်ရုံကဲ့သို့ပင် မြေနေရာထပ်မံမလိုအပ်ဘဲ၊ ဓာတ်ငွေ့များ ထပ်မံ မလိုအပ် ဘဲ ၂၀ ဒသမ ၅၄ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေသည်။ အကျိုးကား လက်ရှိဓာတ် ငွေ့ပမာဏဖြင့်ပင် ၁၅ မဂ္ဂါဝပ်ခန့် ပိုမိုထုတ်လုပ်လာနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ နည်းပညာသစ်များသုံးစွဲခြင်း၏ အကျိုးကား အံ့မခန်းပင်။ ကျွန်းချောင်းစက်ရုံ၏ စီမံကိန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလသည်လည်း စီးပွားဖြစ်စတင်လည်ပတ်သည့်နေ့မှ စ၍ ငါးနှစ်ဖြစ်၏။ ထွက်ရှိလာသည့် ဓာတ်အားများကို ကျွန်းချောင်းစက်ရုံဝင်းအတွင်းရှိ 66 kV Bus နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်သို့ ပို့လွှတ်သွား မည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ အထက်တွင်တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နွေရာသီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်စွာဖြန့်ဖြူး ပေးနိုင်ရေးအတွက် အချိန်တိုအတွင်း တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် စက်ရုံစီမံကိန်းခုနစ်ခု၊ ၁၁၆၆ မဂ္ဂါဝပ် အနက် စီမံကိန်းသုံးခု၊ ၁၈၆ မဂ္ဂါဝပ်ခန့်သည် နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပေပြီ။ ကျန်ရှိသော စီမံကိန်းများသည်လည်း မကြာမီအချိန်အတွင်း လျှပ်စစ် ဓာတ်အားများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ၏။
လတ်တလောတွင် ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ်ကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း သွားလာမှုများကို အထူးကန့်သတ်ထား၏။ လူတစ်ဦးချင်းစီ လိုက်နာရမည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကာ အကွယ်များကို အလေးအနက်ထား၍ လိုက်နာစေလျက်ရှိ ၏။ ပြည်သူလူထုအများစုအား Stay Home နေစေ၏။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအများစုအား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းစီသာ ကန့်သတ်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေ၏။ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအချို့ ယာယီရပ်ဆိုင်းသွားသည့်တိုင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမှာ ရပ်ဆိုင်း သွားခြင်းမရှိပေ။ ပြည်သူလူထု၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုလားတောင့်တချက်သည်လည်း ရပ်တန့်မသွားပေ။ သို့ဖြစ်ရာ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း များအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကို သတိကြီးစွာထားရင်းကပင် ရပ်တန့်၍ မရသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများကို မနားမနေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ရွှေသည်တန်ဖိုးအလွန်ကြီးကြောင်း၊ ရွှေကို လူတိုင်း လိုလို နှစ်သက်မက်မောကြကြောင်း၊ လိုလားတပ်မက်ကြ ကြောင်း၊ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကြိုးစားလေ့ရှိကြကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုအားလုံး အတွက်ကား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရွှေကဲ့သို့ပင် တန်ဖိုး ထားလိုလားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ခံစားဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ သည်။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူထူထု ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို အဆက်မပြတ် ဖြည့်ဆည်းလျက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း အသီးအပွင့် အခက်အခိုင်တို့ကို ပြည်သူလူထုထံ အပ်နှံနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါလျှင်-
အထက်တွင် ဖော်ညွှန်းခဲ့သော “အလုံ” နှင့် “ကျွန်းချောင်း” စက်ရုံများသည်လည်း နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အဖိုးထိုက်တန်သော “ နှစ်ခိုင်လုံး ရွှေ” ဖြစ်ကြောင်းကို မည်သူမျှ အငြင်းပွားကြလိမ့်မည် မထင်ပေ။ ။